आमासंगै क्वारेन्टिनमा बसेकी बाजुराकी दुई वर्षीया बालिकाको मृ',त्यु कोरोनाकै कारण भएको पुष्टि - Filmy News Portal Of Nepal
‘आमासंगै क्वारेन्टिनमा बसेकी बाजुराकी दुई वर्षीया बालिकाको मृ’,त्यु कोरोनाकै कारण भएको पुष्टि’
नेपालमा कोरोना सं,क्रमणका कारण मृ त्यु हुनेको संख्या ८ पुगेको छ । आज मृ,त्यु भएकी बाजुराकी दुई वर्षीया बालिकामा कोरोना भा’इर’स (कोभिड-१९) भएको पुष्टि भएको छ । बूढीगंगा नगरपालिका–१ घर भएका उनी आमाबुबासँगै ८ दिनअघि भारतबाट नेपाल आएका थिइन् ।
भारतबाट फर्किने क्रममा बालिकालाई ज्व’रो आउने, बा’न्ता हुने सम’स्या थियो । नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई घुरालसैना माविको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो । क्वारेन्टिनमा रहँदा सामान्य औ’षधि गर्दा पनि सञ्चो नभएपछि १५ गते उनलाई जिल्ला अस्पताल बाजुरामा भ’र्ना गरिएको थियो ।
आइसोलेसनमा उपचार गर्ने क्रममा शनिबार बिहान करिब २ बजेतिर उनको मृ”त्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. रुपचन्द्र बिकले बताए । डा. बिकका अनुसार अस्पताल ल्याउँदा नै बालिकामा क’डा निमोनिया थियो । शनिबार बिहान बालिकासँगै आमाबुबाको स्वा’ब संकलन गरेर धनगढी पठाइएको थियो ।
बालिकासँगै उनकी आमाको पनि कोरोना रि’पोर्ट पो’जेटि’भ आएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले जानकारी दिए । बाबुको कोरोना परीक्षण रि.पोर्ट भने ने.गेटिभ आएको छ ।
कोरोनाको त्रासमा हुनुन्छ ? आउनुस् कोरोना लागेकै ब्यक्तिको अनुभब हेरौ (भिडियो)
तिते करेली खानुको फाईदा यती धेरै !
त’नाबमा हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुस् क्षणभरमै गायब हुन्छ तना’ब !